Horudhac: Atalanta vs Paris Saint-Germain – Shaxda ay ku soo geli karaan, Xaqiiqooyinka & Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Champions League – Gool FM
(Lisbon) 12 Agoosto 2020. Paris Saint-Germain ayaa caawa la ciyaari doonta Kooxda Atalanta BC kulankeedii ugu horreeyey ee siddeed dhammaadka Champions League, iyadoo u jeedkoodu yahay inay sii noolaadaan oo ay u gudbaan afar dhammaadka Koobka horyaallada Yurub.
PSG ayaa durbaba ku soo guuleysatay dhamaan saddexda koobka ee maxaliga ah, waxaana ay haatan indhaha ku hayaan inay ku guuleystaan Champions League markii ugu horeysay, iyadoo kulankaan Atalanta uu u yahay kulankii ugu horreeyay.
Kulankan ayaa ah kaliya hal dhug oo kala bax ah halka Champions League uu markii hore ahaan jiray heerkaan oo kale mid labo lug ah oo minin iyo marti ah, laakiin kaddib markii uu saameeyey ciyaaraha Koroona, waxaa la go’aansaday in min hal lug lagu ciyaaro Waddanka Portugal.
Kulanka caawa PSG iyo Atalanta ayaa ka dhacaya garoonka Estadio da Luz kooxdii adkaata ayaana iska xaadirin doonta afar dhammaadka Koobka Horyaallada Yurub.
Taariikhda: Arbaco 12 Agoosto 2020
>- Marco Sportiello ayaa ku bilaaban doona goolka kooxda Atalanta kulanka caawa, maadaama uu maqan yahay goolhayaha dooqa koowaad ee Pierluigi Gollini.
>- Josip Ilicic ayaa kaliya u saftay Atalanta tan iyo intii dib loo bilaabay ciyaaraha waxaana uu seegi doonaa kulanka caawa markii uu ku dhibtooday inuu taam noqdo, Mario Pasalic iyo Ruslan Malinovskiy ayaa bedel u noqon doona kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A.
>- Luis Muriel ayaa dhaliyay 11 gool isagoo badal ahaa horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii 2019/20, waxaana ay u badan tahay inuu ka ciyaari doono door taageero ah kursiga keydka, kulanka ay ka horjeedaan Paris Saint-Germain.
>- Kylian Mbappe ayaa markii hore laga saaray kulanka wareegga quarter-finalka ama siddeed dhammaadka PSG ee ay la ciyaarayaan Atalanta kaddib dhaawac xun oo canqowga ah oo ka soo gaaray kulankii Lyon ee final-ka League Cup 31-kii July, tan iyo markaas ee habeennimadii Axadda, Kooxda PSG ayaa ugu yaraan rajo ka qabta inuu lug ku yeelan karo kulanka caawa oo Arbaco.
>- Marco Verratti ayaa la safray kooxda PSG, laakiin waxaa lagu soo warramayaa inuu dhaawac muruqa ah kaga maqnaan doono kooxda Tababare Thomas Tuchel, mana u badna inuu markale ka soo muuqan doono ololahan Champions League.
>- Angel Di Maria ayaa ganaax casaan ah uga maqnaan doona kooxda haysata horyaalka Ligue 1, kulanka PSG ay la yeelanayso caawa Naadiga Atalanta, halka Thomas Meunier iyo Edinson Cavani labadoodaba ay ka tageen PSG bishii July kaddib markii qandaraasyadooda ay dhacayeen.
>- Juan Bernat iyo Colin Dogba ayaa labadoodaba dhaawac ku seegay guushii koobka League Cup oo ay gaartay kooxdooda PSG, laakiin waa ay ka soo kabsadeen dhaawacyadaas.
>- Mauro Icardi ayaa dhaliyay lix gool shantii kulan ee ugu dambeeyay oo uu ka hortagay Kooxda Atalanta.
<> Labadaan kooxood ayaa midba tan kale la ciyaari doontaa markii ugu horreysay, mana jiro tartan rasmi ah oo labadaan kooxood hore u dhexmaray.
<> Kooxda PSG ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay lix ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Champions League.
<> Kooxda Atalanta ayaa dhankeeda guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay Champions League.
<> Atalanta ayaa dhalisay ugu yaraan saddex gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Champions League.